RedNotebook: Balooggaaga iyo joornaalkaaga Linux (Qaybta I) | Laga soo bilaabo Linux
Waxaan muddo dheer doonayay inaan helo codsi ii ogolaanaya inaan wax qoro oo isla markaa fursad ii siiya inaan helo iyaga mustaqbal aan la cayimin. Waxaa jira codsiyo sida Tomboy ah oo sida muuqata qancin kara baahidaas, laakiin markii aan hirgalinayay waxaan ogaaday in nidaamkani gebi ahaanba aan shaqeynin.
Barnaamijyada sida Tomboy ayaa ah kuwa dhabta ah ee u dhigma adduunka iyadoo la adeegsanayo qoraalo dheg dheg ah si loo duubo xogta waqtiga ku habboon. Waxa aan u baahday waxay ahayd halkii buug yare, wax aan u qoro intii aan doonayay oo aan go aansado goor dambe haddii ay khuseyso iyo in kale. Tani waa sida raadintaydu iigu horseeday dalabkii aan maanta kuu soo bandhigo: RedNotebook.
RedNotebook waa, sida uu qoraagu qabo, waa bog iyo wargeys isku-dhaf ah. Waxaa ka mid ah jadwalka taariikhda ee lagu socdo qoraalada maalin kasta, qaabab loo habeyn karo qoraaladaada, higaada higaada, u shaqeynta dhoofinta waxa qoran iyo shaqeynta calaamadeynta. Waxay leedahay "Erey Daruuro" halkaasoo kuwa ugu khuseeya lagu muujiyo (Sida ku jirta naqshaddii hore ee baloogga), in kastoo aad ereyo ka raadin karto baarka raadinta. RedNotebook waa Software Bilaash ah oo hoos yimaada shatiga GPL.
Ubuntu iyo adeegsadayaasha soosaara, waxaad aadi kartaa Xarunta Software-ka. Kuwa jecel inay isticmaalaan nooca ugu dambeeya ee xasilloon ee ka socda terminal:
RedNotbook sidoo kale waxaa laga heli karaa bakhaarrada kale ee qashin-qubka. Sidoo kale, nambarka waxaa laga heli karaa bogga rasmiga ah.
Waxaan idin la sugayaa inaan ka sameeyo cashar yar oo ku saabsan sida loo isticmaalo RedNotebook, iyadoo laga faa'iideysanayo muddada nasashada dugsiga. Ilaa qaybta soo socota.
Xigasho: Bogga rasmiga ah ee RedNotebook
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » RedNotebook: Balooggaaga iyo joornaalkaaga Linux (Qaybta I)
Waa hagaag qoraal ahaan tifaftiraha, Sabayon sidoo kale waa keyd, way ku filnaan laheyd:
iyo ugu dhakhsaha badan
Ma dafirayo inay sifiican u shaqeyso, waxaan doonayay inaan u adeegsado laakiin kuma garaacin cidiyaha madaxa qaab is-baray waxaanan raadinayay casharro iga caawin doona waxna ma ahan, way fiicnaan laheyd haddii aan ku sameeyo muddo yar gudahood maxaa yeelay waxay noqon laheyd mid waxtar leh, ku saabsan kuligood markay madxaf kuu yimaadaan. Waxaan ku weydiin lahaa marka aad sameyso, inaad sida ugu macquulsan u soo shaac baxdo.
Waqti ka hor markii aan raadinayay codsi ii oggolaanaya inaan sii haysto baloog shaqsiyeed, waxaan helay RedNotebook, nasiibdarro kuma qancin muuqaalkeeda iyo si fudud maxaa yeelay ma aysan helin dhab ahaan wixii aan doonayay.
Waxaan ku dhammeeyey isticmaalka FlatPress oo lagu ilaaliyo qoraal bash ah oo aan naftayda iyo voila ku baray, wax kasta oo la mid ah luul 😀
Kontact wuxuu leeyahay intaas oo dhan iyo in ka badan ..
Kontact aad u cajaa'ib badan, kuma aanan farxin la kulankiisa.
Kontact maahan buug xiriir?
Hadda waan rakibay laakiin markaan gujinayo New waxba ma dhacaan, hahaha. Ma waxay kuxirantahay xirmo kale? Kan aan rakibay ayaa ah kdepim-kontact ee Arch repos.
RedNotebook looguma talagalin in lagu qoro, laakiin waa xusuusqor shaqsiyeed. Waan ogahay tan maxaa yeelay dhowr bilood ka hor waxaan sidoo kale isku dayay anigoo raadinaya beddelaadyo bilaash ah oo baahsan oo loogu talagalay Evernote. Farqiga udhaxeeya iyada iyo Evernote ayaa ah, halka ay liis garaynayso qoraalada siday u kala horeeyaan isla markaana ay kuwada tusayso dhamaantooda iskudhafka wejiga yar, RedNotebook waxay kalasoocaysaa taariikhda waxayna kaliya muujineysaa maalinta hada kujirta is dhexgalka. Haddii aad rabto inaad aragto kuwa kale, waa inaad daalacataa jadwalka.
Intaas waxaa sii dheer, Evernote wuxuu kuu oggolaanayaa inaad u sameysato qoraal u gaar ah wax kasta oo aad rabto, laakiin RedNotebook waxay abuurtaa oo keliya hal qoraal maalintii, oo dhammaan waxyaabaha aad rabto inaad qorto waxay ku aadaan isla isla warqaddaas (in kastoo aad ku dari karto kala-saareyaasha).
Marka raadinta beddelka bilaashka ah ee 'Evernote' waxba ma noqon. Waxaan tijaabinayaa waxa KZKG ^ Gaara uu leeyahay, aniga iguma soo dhicin inaan u isticmaalo FlatPress. o_O
Sidee yaab leh, wakiilka isticmaalaha ayaa lumay Aan aragno…
Waxaan u maleynayaa inay diyaar tahay.
Haa diyaar. 😀
Halkan ka eeg fikradda aan ku dhaqmay: https://blog.desdelinux.net/script-avanzado-en-bash-bashmd5-para-proteger-algo-explicacion-detallada/
Waxaan horeyba u hayaa feylalkeyga shaqsiyadeed ee kujira galka eCryptfs Maaddaama FlatPress uu adeegsado faylasha qoraalka caadiga ah halkii uu ka kaydsan lahaa xog-ururinnada, aad bay iigu fududaan laheyd inaan ku badbaadiyo halkaas oo aan ka dhigo inay ku shaqeyso adeegsiga isku xirnaanta astaamaha.
Waxaan door bidaa inaan keydiyo furaha sirta ah, hadii aan keydin lahaana ma sameyn lahaa MD5; aad bay ufududahay in laqeexo. Xitaa waxaa jira goobo aad kaliya ku dhajiso xashiishka waxayna ku tusaysaa qoraalka la tirtiray, sida tan: http://www.md5decrypt.org/
Waxbadan kama aqaano Evernote, laakiin ma haysto taageero rasmi ah oo Linux ah iyo wixii ku dhacay Akhristaha Google, waxyaabo badan ayaan daruurta ku aaminin.
Waxaan u isticmaalaa iyada oo loo marayo PlayOnLinux. Ma socdo 100% laakiin waxqabadka waa la aqbali karaa (ma ahan sida NixNote oo isku dayaysa inuu dhalaaliyo kumbuyuutarka).
Faa'iidada Evernote waa inay aad u awood badan tahay. Waad keydin kartaa boggaga internetka, shaashadaha shaashadda, faylalka soo dejisan kartaa, qori kartaa codadka, ku kala sooci kartaa buuggaagta iyo tags, iwm, iwm
Xaqiiqda ah in ay ka shaqeyso daruurta ayaa leh cillado laakiin sidoo kale waa mid aad ugu habboon in aan lagu koobin kombuyutarkaaga laakiin la awoodo in la haysto qoraaladaada oo kuwa cusub laga qaato aalad kasta; iyo gaar ahaan mobilka. Xitaa waad sawiro ku qaadan kartaa kaamirada mobilada oo isla markaaba waxaad ku lifaaqi kartaa qoraal; Iyo tan iyo markii ay u beddelayso qoraalka sawirrada qoraal la raadin karo, haddii aad sawir ka qaadatid dukumiinti waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku dhex baarto.
Sababta aad u raadineyso bedel bilaash ah ayaa ah kaliya inaad ku hayso qoraalo badan oo gaar ah halkaas, maahan inaad ku talo jirto inaad bedesho Evernote, oo maanta ah mid aan laga gudbi karin. Waxaa laga yaabaa mustaqbalka haddii ay baaba'do ama ay soo rogto xaddidaado xanaaq leh (taas oo had iyo jeer ah khatar qarsoodi ah) Waxaan ka fiirsan lahaa inaan beddelo gebi ahaanba, laakiin hadda aad ayaan ugu qanacsanahay.
Waxaan horeyba ugu bilaabay casharka, hubi inaad booqato baloogga. Waxaan kuu xaqiijinayaa inay tahay ka hor jimcaha. Salaan.
Waxaan isticmaalaa qormada (http://keepnote.org/). Waad qaadan kartaa qoraalada sida aad rabto, waxaad ku abaabuli kartaa faylal, ku dar sawirro, waxaad abuuri kartaa xiriiriyeyaal (xitaa qoraallada u dhexeeya). Tan iyo ku haynta DropBox ka badan inta daboolaysa baahidayda.
Sida Rednotebook, waan isku dayay in cabaar ah laakiin kuma qancin, mana aanan dareemin raaxo, xitaa inaan u isticmaalo sida xusuus-qofeed shaqsiyeed waa mid adag (waxaan jeclahay inaan naftayda u abaabulo si ka badan mowduuc ka badan taarikhda) oo xitaa xitaa daruuraha taaga ma shaqeyn raaxo leh in la maareeyo.
Waxaan marhoreba tijaabiyey KeepNote sabab walbana waan u hayn waayey, waxaan la yaabanahay waxay noqon doonto. Dib ayaan u rakibayaa si aan u arko waxay ahayd. 😛
La rakibay, la tijaabinayo ...
Hore ayaan uxasuustay, waxay ahayd keydinta baabuurta darteed. Waxay ikhtiyaar u leedahay inay si otomaatig ah u keydiso qoraalka X ilbiriqsi kasta; Dhibaatada jirta ayaa ah in ay ku fariisato deg deg deg ah markasta oo aad keydiso, marka hadaad doorato autosave aad u badan (sida caadiga ah waa 10kii il biriqsi kasta) way barafoobaysaa marar badan. Hadaad kordhiso waqtiga udhaxeeya gawaarida, halista inaad lumiso isbeddelada haddii aad fashilanto sidoo kale wey kordheysaa, haddii aad barkintaana, waxaad ku bixin doontaa inaad wax walba ku keydiso gacanta. Xaaladaha oo dhan si kastaba ha noqotee waxay xiri doontaa mar kasta oo aad kaydiso. Qabow kasta wuxuu socdaa ilbiriqsi, laakiin xoogaa ka dib wuxuu ku dhammaadaa inuu noqdo mid dhib badan.
Malaha aniga oo keliya ayaa qaboojiya. Ama waxaa laga yaabaa inay tahay wax nidaam oo aad u baahan tahay inaad wax ka beddesho si aysan u dhicin. : S
Waxaan hayaa autosave-ka 5 daqiiqo kasta. Sidoo kale kiiskeyga in "keydsho" ay adag tahay in la dareemo, dhab ahaantii anigu si dhib ah weligey ma ogaan.
Maskaxda ku hay in notenote-ku uu adeegsado keydka macluumaadka ee 'SQLite', waxaa laga yaabaa in aan la hagaajin waana taas sababta ay u keento xanaaq qaar ka mid ah.
Waxaan sidoo kale raadinayay maamule qoraal oo wanaagsan waana adag tahay in la helo mid ku habboon waxaad rabto.
Wax kasta oo daruuraha ku jira aniga ima xiiseeyaan.
Waxaan u adeegsadaa buugga 'Rednotebook' si aan uga qaato qoraallo iyo fikrado, oo aan markaa ugu sii gudbiyo degel kale, in kasta oo ay ku abaabulan yihiin taariikho, waxaad had iyo jeer leedahay tags si aad u hesho waxaad rabto. Lama ilaalin karo ereyga sirta ah.
Si la mid ah evernote, waxaa jira Nixnote, oo fiican, oo lagu abaabulo mowduuc,
Midka wanaagsan waa MyNotex, oo lagu abaabulo mowduuc.
Maareeye hawleed; Helitaanka Waxyaabaha Gnome !, Waxaan u isticmaalaa waxyaabo aan sameeyo iyo qoraalo yar yar. Waan ku faraxsanahay.
Waxaa sidoo kale jira taariikh nololeed, oo ah joornaal sirta lagu ilaaliyo oo la mid ah Rednotebook. Waa xusuus qor shakhsiyeed.
Waxaad ku garaacday ciddiyaha madaxa, sirta ururka ayaa ku jirta sumadaha.
Microsoft waxaa laga dacweeyay isticmaalka UEFI